အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်သို့ … ခြေလှမ်းငယ်လေးများ – Myanmar Forex Villa
www.youtube.com on AUDNZD (Daily)
muha meds carts on AUDJPY (Daily)
အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်သို့ … ခြေလှမ်းငယ်လေးများ
Forex Trading လောကမှာ အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ မိတ်ဆွေတိုင်းအတွက် စိတ်ခွန်အားတွေရစေဖို့ ဒီ Motivational Video လေးကို မျှဝေချင်ပါတယ်။
Forex Trading လောကမှာ အောင်မြင်တဲ့ Professional Trader တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မဆုတ်မနစ်ဇွဲမလျှော့တမ်း လုပ်ဆောင်မှု Consistency ဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
ရေစက်တစ်စက်နဲ့ အိုးတစ်လုံးမပြည့်နိုင်သလို၊ အချိန်ကာလအတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ သင်ယူလေ့လာမှု အဆက်မပြတ်မရှိရင်လည်း အောင်မြင်မှု မရနိုင်ပါဘူး။
Successful Pro Trader တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့၊ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ နေ့စဉ်မပြတ် သင်ယူလေ့လာခြင်းဆိုတဲ့ ခြေလှမ်းငယ်လေးတွေကို မပြတ်လှမ်းသွားရပါမယ်။
အစပထမ လပိုင်း၊ နှစ်ပိုင်းတွေမှာ တိုးတက်မှုဟာ မသိသာတဲ့အတွက် လူအများစုဟာဒါကိုရှုံးနိမ့်မှုလို့ မြင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ Risk & Reward Management ပြုလုပ်ပြီး မိမိတတ်နိုင်တဲ့ Deposit တစ်ခုကို မဆုံးရှုံးဖို့ ကာကွယ်ရင်း ပညာသင်ယူရင် အချိန်တစ်ခုမှာ အောင်မြင်လာမှာပါ။
ဘယ်တော့မှ စိတ်ဓာတ်မကျဘဲ Consistency ရှိရှိ အဆက်မပြတ်ခြေလှမ်းတွေကို နေ့စဉ်လှမ်းနေဖို့ပဲ လိုအပ်ပါတယ် …
နေ့တိုင်း အမြဲပြန်စဉ်းစားရင် …
ဒီနေ့ ကိုယ်ဘာသင်ခန်းစာ ရလိုက်သလဲ ?
ဒီနေ့ ကိုယ်ဘယ်လို Education နဲ့ Knowledge ရလိုက်သလဲ ?
ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနှစ်ခုအတွက် နေ့စဉ်ခြေလှမ်းတွေကို မပြတ်လှမ်းနိုင်ရပါမယ်။
ခြေလှမ်းတိုင်း၊ ခြေတစ်လှမ်းတိုင်း၊ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတိုင်း၊ နောက်တစ်လှမ်းတိုင်းဟာ တစ်နေ့မှာ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ဆီကို အရောက်ပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
Project X Trading Team
Forex Trading လောကမှာ အောငျမွငျအောငျလုပျမယျလို့ စိတျပိုငျးဖွတျပွီး ကွိုးစားအားထုတျနတေဲ့ မိတျဆှတေိုငျးအတှကျ စိတျခှနျအားတှရေစဖေို့ ဒီ Motivational Video လေးကို မြှဝခေငျြပါတယျ။
Forex Trading လောကမှာ အောငျမွငျတဲ့ Professional Trader တဈယောကျဖွဈဖို့ မဆုတျမနဈဇှဲမလြှော့တမျး လုပျဆောငျမှု Consistency ဟာ အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။
ရစေကျတဈစကျနဲ့ အိုးတဈလုံးမပွညျ့နိုငျသလို၊ အခြိနျကာလအတိုငျးအတာ တဈခုအထိ သငျယူလလေ့ာမှု အဆကျမပွတျမရှိရငျလညျး အောငျမွငျမှု မရနိုငျပါဘူး။
Successful Pro Trader တဈယောကျဖွဈဖို့၊ ကိုယျရညျမှနျးထားတဲ့ပနျးတိုငျရောကျဖို့ နစေ့ဉျမပွတျ သငျယူလလေ့ာခွငျးဆိုတဲ့ ခွလှေမျးငယျလေးတှကေို မပွတျလှမျးသှားရပါမယျ။
အစပထမ လပိုငျး၊ နှဈပိုငျးတှမှော တိုးတကျမှုဟာ မသိသာတဲ့အတှကျ လူအမြားစုဟာဒါကိုရှုံးနိမျ့မှုလို့ မွငျတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ Risk & Reward Management ပွုလုပျပွီး မိမိတတျနိုငျတဲ့ Deposit တဈခုကို မဆုံးရှုံးဖို့ ကာကှယျရငျး ပညာသငျယူရငျ အခြိနျတဈခုမှာ အောငျမွငျလာမှာပါ။
ဘယျတော့မှ စိတျဓာတျမကဘြဲ Consistency ရှိရှိ အဆကျမပွတျခွလှေမျးတှကေို နစေ့ဉျလှမျးနဖေို့ပဲ လိုအပျပါတယျ …
နတေို့ငျး အမွဲပွနျစဉျးစားရငျ …
ဒီနေ့ ကိုယျဘာသငျခနျးစာ ရလိုကျသလဲ ?
ဒီနေ့ ကိုယျဘယျလို Education နဲ့ Knowledge ရလိုကျသလဲ ?
ဆိုတဲ့ မေးခှနျးနှဈခုအတှကျ နစေ့ဉျခွလှေမျးတှကေို မပွတျလှမျးနိုငျရပါမယျ။
ခွလှေမျးတိုငျး၊ ခွတေဈလှမျးတိုငျး၊ နောကျထပျခွလှေမျးတိုငျး၊ နောကျတဈလှမျးတိုငျးဟာ တဈနမှေ့ာ အောငျမွငျမှုပနျးတိုငျဆီကို အရောကျပို့ပေးပါလိမျ့မယျ။
Posted on January 6, 2018 Author Ko ThantCategories ဆောင်းပါး
8 thoughts on “အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်သို့ … ခြေလှမ်းငယ်လေးများ”
same unwanted rehashed information. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m
my blog … porno (Jim)
size 16 pants measurements says:
anything completely, however this post offers good understanding even.
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to mention that I’ve truly enjoyed surfing around
your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and I’m hoping you write again very soon!
Good day I am so delighted I found your blog page, I really found you by mistake, while I was looking on Aol for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks foratremendous post andaall round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great b.|
Previous Previous post: TA and FA ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို လုပ်ကြပါသလဲ။
Next Next post: ရှင့်ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်နော်